Hindiya oo hal howlgal hawada ugu dirtay 104 dayaxgacmeed - BBC Somali
Hindiya oo hal howlgal hawada ugu dirtay 104 dayaxgacmeed
Lahaanshaha sawirka ISRO
Image caption Culeyska qalabka hawada loo diray ayaa u dhaxeeya in ka badan 700kg ilaa 1.5kg
Hindiya ayaa taariikh sameysay kaddib markii ay ku guulaysatay inay hal howlgal hawada ugu dirto 104 dayaxgacmeed, iyadoo sidaana uga saramartay rikoorkii hore ee uu Ruushka dhigay 2014-kii markaa oo uu hal mar hawada sare u diray 37 dayaxgacmeed.
"Xilli weyn oo wanaagsan ayey u tahay qofkasta oo inaga mid ah. Maanta waxaannu sameynay taariikh," waxaa hadalkan ay wakaaladda wararka ee Reuters ka soo xigatay Agaasimaha mashruucaasi B Jayakumar.
Ra'iisul Wasaaraha Hindiya, Narendra Modi, ayaa ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay ee u hambalyeeya saynisyahanada.
Kalmadda "rikoor caalami ah" ayaa subaxii Arbacada noqotay hadalheynta ugu badan ee barta Twitter-ka ay ku wadaagayaan dadka ku nool Hindiya.
Mareykanka ayaa iska leh 96 ka mid ah 104 dayaxgacmeed ee yaryar, halka wadammada kale ee ajaanibta ah ee dayaxgacmeedyada ku lahaa howgalkanna ay kala yihiin Israa'iil, Kazakhstan, Imaaraatka Carabta, Switzerland iyo Netherlands.
Image caption Gantaalka xambaaray 104 dayaxgacmeed ayaa laga ganay xarunta laga hago dayaxgacmeedyada ee Sriharikota